Ribonucleic I kamva | iinzuzo namathuba
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ribonucleic I kamva | iinzuzo namathuba
Le nkampani yezemali abathengi kunye credit card kwekhadi, ukuze inkonzo ngokuba "ribonucleic kamva" okanye "utshintsho ribonucleic" liye longeziwe. Oku, kuba imali ukusetyenziswa ikhadi le "-kanye kabini-bonus yesixa", yinkonzo, ezifana ungatshintsha indlela yokuhlawula ngomhla kamva ajikelezayo ngetyala.
ribonucleic kamva, tsalela iziko zemali emva kokuba ezivenkileni, ngokubhalisela evela kwi Internet, ungasebenzisa. Noko ke, ekubeni ixesha Umda inikezelwe kwi sicelo, khangela umhla wokuphelelwa kwisiza esemthethweni okanye ubuzise ukuba iziko mali ngamnye, Zama ukuba makenze isicelo kude. Kufuneka kuqatshelwe ukuba, wabona amakhadi amaninzi ukuba ubhalisele de kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi komhla yentlawulo.
Ukongeza, isixa semali na olujikelezayo ngetyala ukuba ikhadi ngalinye, baye ubeke imida. Oku kuthiwa "umda esijikelezayo ngetyala," kodwa, kuba imali ukusetyenziswa i ngaphezu komyinge olujikelezayo ngetyala, ngenxa yokuba kaninzi kuhlawuliswa isisixa esinye kwinyanga ezayo, makhe silumke.
olujikelezayo letyala kamva, ekubeni kusenokwenzeka ukuba isixa phantse ezithile intlawulo yenyanga kungakhathaliseki nani elifumanekayo, kukho iinzuzo ezifana kulula ukwenza isicwangciso kwemali elifanelekileyo. Kwanokuba indlela kwishifti kwenzeka kwisicwangciso lokuhlawula, ukuba basetyenziswa kakuhle ribonucleic kamva, apho kuya kubakho ithuba lokuba Tatenaoseru isicwangciso intlawulo.
Ukongeza, naxa inkcitho ngequbuliso lwenzeka kwi zihlandlo lwesithethe ezinjalo, ungakwazi basebenzisa le ribonucleic kamva. Ngokuba uyakwazi ukutshintsha intlawulo esisixa-mali xa olujikelezayo ngetyala, oko kuya kukhokelela ukunciphisa umthwalo intlawulo yenyanga. Ngexesha
, emva kokuba ukutshintsha kamva, amakhadi ribonucleic naye wabona, ezifana singenza intlawulo eyongezelelweyo ngokosuku ekuqaleni. Ukuba ezifana "Ndifuna ukuba abuyise yokunqongophala kwemali ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka Ukuba kusinda," Makhe sijonge ukuba ikhadi enjalo.
reference | ukusuka iinzuzo
emva olujikelezayo ribonucleic credit of Dementieva Xa ikhadi zikhanyiswe jikelele
, kwaye ukhethe i-kanye kabini-bonus yesixa intlawulo indlela yentlawulo, oko akuthethi ukuba umyinge wenzala ikhomishini. Noko ke, xa utshintsha ukuya olujikelezayo ribonucleic ngetyala kamva, kwakunye ngetyala oluqhelekileyo esijikelezayo uya kuthatha imali wenzala kwangaphambili.
Ukongeza, umzekelo, xa utshintsha ukusuka intlawulo esisixa-mali xa olujikelezayo ngetyala, uya kuba isixa umdla kuthatha ezingaphezulu. Ngale ndlela, le ribonucleic kamva ungenza uthathe ithuba njengendlela ukwandisa ixesha lokuhlawula, kodwa ngenxa yokuba kukho uloyiko lokuba olunyuswe ngokugqithisileyo imali intlawulo iyonke imali, kubalulekile ukwazi kwangaphambili.
, ukuba "ixesha intlawulo yalo ingapheli" Kuya kubakho engxakini. Xa ixesha lokuhlawula ingapheli, kukho kungenzeka esichaphazela iimviwo kwezinye mboleko ezifana mboleko yezindlu. Ngaphambi kokuba usebenzise ribonucleic kamva kukuba ukuqonda ezi neengxaki, ngokwemiqathango ukuma ngokuqinileyo isicwangcwiso sentlawulo, Zama ukujonga ukusetyenziswa.
reference | olujikelezayo yamatyala demerit
reference | imbali nokugqwesa ngetyala olujikelezayo ukuya iimviwo mortgage kuya kuchaphazela?
Qala, emva kokuba kwenziwe isicwangciso intlawulo ngokuqinileyo, Zama ukujonga ukusetyenziswa.